Onye nkatọ na-eri nri rutere n'ahịrị - TELES RELAY
Usoro salad dị na mpaghara Chopt.
Foto: Dorling Kindersley / Getty Image
Ọ bụ ihe ama ama ama na ọfụma na-agha ndị agha ndị agha agha ogologo oge maka ụdị egwu na oke iwe oge ọ bụla ha nọrọ n'ọhịa, yabụ o yiri ka ọ ga-adị n'etiti ndị isi nke ndị nkatọ ụlọ nri. N'afọ ndị gafeworonụ, ka ọnọdụ dịgasị iche iche na-agba agba na-agba si na gburugburu ebe obibi na-agbanwe agbanwe, mụ na ndị ọrụ ibe m emeela ka anyị na ọtụtụ ndị dị n'udo iju na discordant mmepe, tinyere burgers na $ 33, nri dị na steepụ ọkaibe, mkparịta ụka na-enweghị njedebe na pedigree nke beets na karọt elu ebe a na-efe efe, ofufe nke nri "ahịhịa" na nri - Chineke machibidoro iwu na-echekwa - pere mpe, ime ụlọ ndị mmadụ na-eme mkpọtụ.
Nke a nwere ike ịbụ ihe mere onye nkatọ gị ji nwute na nso nso a nwetaghachiri ihe ịtụnanya ọzọ banyere oge ọhụrụ a na - achọsi ike: usoro nri. Ọbụlagodi nke ahụ bụ ihe batara n’obi m mgbe m nọ na ngwụsị izu Pizza Scarr, na mpụga Chinatown. Amatara m onwe m na ndị enyi si n'azụ obodo na-akpachapụ anya, ọ tụrụ m n'anya ịhụ ka obere igwe mmadụ na-agbafe n'ọnụ ụzọ. Anyị bụ ma eleghị anya mmadụ iri na ise niile: ndị njem, ndị afụ ọnụ, ndị nnukwu anụ mmiri, ndị mere njem ha njem site na pizza ihe egwu pụrụ iche na mpaghara ahụ.
N’oge na-adịbeghị anya, aga m atụgharị na ikiri ụkwụ m na-achọ ebe ọzọ iji nweta pisi pizza na-enweghị atụ, gịnị kpatara na? Aka ike nke usoro nri nke nje, nke ghọrọ nnukwu obodo maka ọtụtụ afọ gara aga na mbata nke oyibo a ma ama nke Dominique Ansel na-e ,omi nke ọma. nyocha nke dyspeptik, tinyere nke a. Mana n'oge na-adịbeghị anya, ụdị nri malitere ịrịa yiri ka ọ gaferela isiokwu ndị ọzọ (ndewo, Akara achicha nke Japanese na ụlọ ahịa Nutella, na opekata mpe m na etiti obodo m, ahịrị ndị bụ isi (maka kuki mgwakota agwa kuki na ndị Black Tap milkshakes dị egwu) bụ ndò nke onwe ha ochie.
Na Scarr, larịị ahụ adịghịzi agbanwe agbanwe kemgbe Scarr Pimentel n’onwe ya mepere ụlọ ahịa obere iberibe ọfụma ya na Orchard Street afọ anọ gara aga. Dịka anyị ji nwayọ nwayọ were nwayọ na -efe anụ Pizza dị ụtọ, ihe ịtụnanya a na-akasi ndị agadi agụụ nri nwere nri afọ ụfọdụ malitere. Nke mbụ, anyị tamuru ntamu banyere omume enweghị ọrụ anyị, nke yiri egbu egbu. Mgbe ahụ, ka oge nchere anyị belatara, anyị zụlitere mmetụta nke ịbụ onye a dọtara site na ndị njem ibe anyị, bụ ndị mesiri anyị obi ike na piar nke Scarr kwesịrị echere. N'ikpeazụ, ka a na-agbanye ọnụ ọnụ anyị site na windo nke ụlọ oriri na-ekpo ọkụ, enwere mmetụta nke atụmanya na njem ka anyị na-atụgharị uche n'iwu anyị jiri nwayọ nwayọ.
Ọ bụ amamịghe nke ezigbo nri nri, n'ezie: ọ na-ewe gị gaa na ahụmịhe na-emekọ ọnụ, nke na-eme ka ahụmịhe ahụ na njikwa dị iche iche. Dị ka ọtụtụ ndị New York na-eme ihe ike, ana m eri ezigbo nri kwa izu n'amaghịdị, na-awagharị n'akụkụ ụzọ iji nụrụ ụtọ ebe ikpe azu diri, na - agbakọta maka akwa ọhụrụ na Union Square Greenmarket, maka nri ụtụtụ nke osikapa na anụ ezi n'ụtụtụ Yin Ji Chang Fen na Bayard Street, ma ọ bụ kwụ n'ahịrị n'ụtụtụ Satọdee ọ bụla na mpaghara Bagel Bob's na Mahadum Ebe ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, site n'oge ruo n'oge, ịhụ Alec Baldwin n'onwe ya na-ewere ikuku onyeisi ala.
Na njedebe, enwere obere iberibe ole na ole fọdụrụ mgbe anyị ruru mmalite nke eriri ahụ na Scarr, ọ bụrụ na anyị chọrọ ichere ka ndị nkịta ọhụụ pụta na oven, ọ ,ụ ahụ gwara anyị, anyị ga-echere n'èzí. n’akụkụ ụzọ maka ọkara elekere ọzọ. Ya mere, anyị were mpekere anyị (ala nkịtị, onye Sicilil nke nwere ezi akwụkwọ osisi basil) ma jiri nlezianya were ụfọdụ foto ọka maka ntanetịime ntanetịime Instagram anyị. Ihendori ahụ na-atọ ụtọ dị ka tomato dị ụtọ, ọ bụghị shuga, na ọka ndị na-emebi emebi na-adị ma na-afụ ọnụ n'ọnụ ọnụ ya. Mpekere ndị ahụ dị oke mma, anyị niile nwere obi ụtọ ma nwee ọnụ ahịa echere, ọ bụ ezie na mgbe ọzọ m ga - eme ihe ọtụtụ ndị agbata obi nọ na Orchard Street yiri ka ha na-eme. Aga m ebido n’iru maka pepperoni achịcha m (ma ọ bụ abụọ), jee ije nkịta ahụ, rụọ obere ụlọ ahịa ma bịa bulie ya mgbe ọ na-apụta na ite, were rie ya na nkasi obi nke ụlọ nke m.
Rie nụ dị ka ndị ọkachamara.
Debanye aha maka akwụkwọ akụkọ Grub Street.
Amụma nzuzo na ngosi
Site na ị nyefere email gị, ị na-anabata nke anyị okwu et Nzuzo Nzuzo na ịnata ozi nzipu ozi n’aka anyị.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.grubstreet.com/2020/02/adam-platt-food-lines.html
Ihe omumu: Ogwu nwere uru di ogologo oge maka ufodu ndi oria nku ume